रोचक::Nepali Online News Portal
बिरालोले घाँस किन खान्छ ?
बिरालोले हरियो घाँस खान्छ। हामीेले पनि देख्दै र सुन्दै आएको कुरा हो यो। तर बिरालोले किन घाँस खान्छ? यसै विषयमा अमेरिकाका अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धान गरेका छन्। र केही तथ्य पत्ता लगाएका छन्। वैज्ञानिकहरुका अनुसार जतिपटक बिरालोले घाँस खान्छ, उसले त्यतिपटक बान्ता गर्छ। बान्ता गरेता पनि बिरालोले घाँस भने खान छाड्दैन। युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया स्कुल अफ भेटेरिनारी मेडिसिनको अध्ययन...
महिला गर्भवती हुनु र बच्चा जन्माउनु कुनै नयाँ कुरा भएन । तर, अष्ट्रेलियामा भने एक वर्षमा २२ जना पुरुष सुत्केरी भएका छन् । अष्ट्रेलियाको डिपार्टमेन्ट अफ ह्युमन सर्भिसले जारी गरेको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष २२ जना पुरुष गर्भवती बने र बच्चासमेत जन्माए । अष्ट्रेलियामा त्यसरी बच्चा जन्माउने पुरुषहरु समलिंगी पुरुष रहेको पनि बताइएको छ ।...
संसारकै सबैभन्दा ठूलो भ्यागुतो, जो आफु बस्न पोखरी नै बनाउछ
एक अनुसान्धानको क्रममा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो भ्यागुता गोलियथ को पत्ता लागेको छ । यसले आफू बस्नका लागि आँफै तलाउ निर्माण गर्छ । जनरल अफ नेचुरल हिस्ट्रीका अनुसार यो अफ्रीकी प्रजातिको भ्यागुता हो । उक्त अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धानकर्ता मार्विन शेफरले यसको बारेमा जानकारी लिन उक्त भ्यागुतालाई जंगलमा टाइमल्याप्स क्यामरा लगाएर माटोमा छोडेका थिए । भिडियोमा यसको...
थरीथरीका प्रेम, तपाई कस्तो प्रेम गर्नुहुन्छ ? थाहा पाइराख्नुहोस्
प्रेम आफैंमा एक यस्तो चिज हो, जसमा भावना र महसुस (फिलिङ) जोडिएको हुन्छ । प्रेम यस्तो अनुभव हो जसमा मानिसहरुलाई संसार पहिलेभन्दा सुन्दर लाग्न थाल्छ । प्रेममा परेका मानिसहरुलाई यस्तो लाग्छ मानौं उसको वरिपरि चारैतिर मात्र प्रेम छ । तर के तपाईलाई थाहा छ प्रेम कति प्रकारको हुन्छ ? या तपाईले कहिल्यै सोच्नु भएको छ...
एक देख्न सक्दैनन् अर्की हिँड्न सक्दिनन् तरपनि हिमाल पहाड चढिरहेका छन् !
टीम वर्क भयो भने असम्भवपनि सम्भव तुल्याउँन सकिन्छ । अमेरिकाको कोलोराडोका मैलनी नैक्ट र ट्रेवर हनले यो भनाईलाई प्रमाणित गरिएका छन् । तस्वीरमै पनि देख्न सकिन्छ मैलनी हिँड्न सक्दिनन् । ट्रेवर देख्न सक्दैनन् । यसका बावजूदपनि दुबै कोलोराडोको उच्च पहाड चढ्न सकेका छन् । अब दुबै १४ हजार फीट उचाईको हिमाल चढ्ने योजनामा छन्...
श्रीमती बोकेर च्याम्पियन, श्रीमती जति गह्रुँगो त्यति धेरै पुरस्कार
हालसालै फिनल्यान्डमा ‘श्रीमती बोक्ने विश्वव्यापी प्रतियोगिता’ सम्पन्न भयो। अघिल्लो वर्षको विजेता दम्पतीले यो वर्ष पनि बाजी र्मायो। लिथुआनियाका भ्याटाउटास किक्र्लिआउस्कास र उनकी श्रीमती नेरिंगा दोस्रो पटक च्याम्पियन भए। किक्र्लिआउस्कासले श्रीमतीलाई काँधमा बोकेर निर्धारित २ सय ५४ मिटरको बाधा दौड (अब्स्ट्याकल कोर्स) १ मिनेट ७ सेकेन्डमा पूरा गरेका थिए। ‘मलाई त यसपालि जितिँदैनजस्तो लागेको थियो,’...
सामान्य किसानलाई साङ्लोले करोडपति बनायो ! अहिले अरुले पनि सिको गर्न थाले
हरेक नेपालीको भान्सामा साङ्लो एक ठुलो समस्या हुने गर्दछ । यसलाई मार्नकै लागि हामीले अनेकौं विषादी प्रयोग गर्ने गर्छौं । त्यो विषादीले हाम्रो स्थास्थ्यमा पनि प्रतिकुल असर गर्छ । यो सँगै विषादी किन्न पैंसा पनि टन्नै खर्च गर्नुपर्छ । अब भने साङ्लो मार्नुभन्दा त्यसलाई बिक्री गरेर आम्दानी गर्न सकिने काइदा पत्ता लागेको छ ।...
चुम्बन गर्ने बहानामा जिब्रो टोकेर आधा
यो घटना स्पेनको राजधानी बार्सिलोनामा घटेको हो । एक पूर्व प्रेमिकाले आफ्नो पूर्व प्रेमिलाई चुम्बन गर्ने बहानामा जिब्रो टोकेर आधा बनाइदिएकि छिन् । जिब्रो टोकेर आधा भाग छिनालेपछि भुइँमा थुकिदिएकी थिइन् । यो घटनापछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । घटना विवरण अनुसार पूर्व प्रेमिकाले पूर्व प्रेमीलाई देख्ने वित्तिकै अंगालो मार्न चाहेको बताएकी थिईन् । अंगालो मारेपछि...
क्रिकेट विश्वकपबाट भारत बाहिरिएको पीडा कोलकाताका एक प्रशंसकले सहन सकेनन् र उनको मृत्यु भयो । विश्वकपको सेमीफाइनलमा चेज गरिरहेको भारतीय टीमले रविन्द्र जडेजा र एमएस धोनीको शानदार साझेदारीले भारतको जीतको आशा जगाएको थियो । तर जडेजा अनि लगत्तै धोनी आउट भएपछि चाहिँ भारतीय टीमका प्रशंसकहरू उदासीको लहरमा डुब्न पुगे । रोमाञ्चक भिडन्त चरममा पुग्दै गर्दा साइकलपसले श्रीकान्त...
सबैभन्दा ठूलो सेक्स फेस्टिबल, पार्टनर बदल्नेदेखि अरुको अन्तरंग पल हेर्नसम्म पाईने
युरोपको सबैभन्दा ठूलो सेक्स फेस्टिबल अहिले इंगल्याण्डमा चलिरहेको छ । यो कार्यक्रममा सेक्सप्रति उत्साही व्यक्तिका लागि विभिन्न प्रकारको गतिविधीको आयोजना गर्ने गरिन्छ जसमा पार्टनर बदल्नेदेखि अरुको अन्तरंग पल हेर्नेलगायतका काम गरिन्छ । रोचक कुरा के छ भने सेक्स फेस्टिबलमा भाग लिँन पाउँदा मानिसहरु सौभाग्य प्राप्त हुन्छ र मनले चिताएको पुग्छ भन्ने मान्यता राख्ने गर्दछन् ।इंगल्याण्डमा पूरा...
नेपालका के के छन् विश्व सम्पदा सूचीमा ?
चितवन नेशनल पार्क चितवन नेशनल पार्क पहिला शाही चितवन नेशनल पार्कको रुपमा चिनिन्थ्यो । यो नेपालको पहिलो नेशनल पार्क हो जुन सन् १९७३मा स्थापना गरिएको हो । यसलाई सन् १९८४मा विश्व सम्पदा सूचीमा पारिएको थियो । यो पार्क विभिन्न जातका जंगली जनावरको वासस्थानका रुपमा समेत चिनिने गरेको छ । यही क्षेत्रमा विश्वकै चर्चित एक...
१० वर्षदेखि कोमामा रहेकी महिलाले बच्चा जन्माइन्
लामो समयदेखि कोमा उपचार गराइरहेकी महिलाले बच्चा जन्माएको विषयले ठूलो चर्चा पाइरहेको छ । अमेरिकाको एरिजोना राज्यको एक अस्पतालमा १० वर्षदेखि कोमामा रहेकी एक महिलाले बच्चा जन्माएकी छिन् । ती महिलामाथि यौन उत्पीडन भए नभएको बारेमा प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ । यी महिला त्यहाँको फिनिक्स क्षेत्रमा पर्ने हेसिन्डा हेल्थकेयरको एउटा क्लिनिकमा भर्ना भएकी थिइन्...